विएण्डसी हेल्थ विशेष Archives - Page 19 of 20 - Ujyaalo Nepal
Ujyaalo Nepal	 १६ चैत्र २०७४, शुक्रबार ११:३०
मोवाइलको ब्याट्री चार्ज गर्न केही समय कुर्न पर्छ। एकै पटक ब्याट्री चार्च गर्न नसकिए पनि यसलाई केही छिटो भने गर्न सकिन्छ। यहाँ केही तरिका छन् जुन तपाईलाई सहयोगि हुन सक्छन्। १. मोवाइललाई फ्लाइट मोडमा राख्ने मोवाइललाई फ्लाइट मोडमा राख्दा…
मोबाइल पानीमा भिज्यो ? यी उपाय अपनाउनुस् !
Ujyaalo Nepal	 १३ चैत्र २०७४, मंगलवार ०८:०७
मोबाइल फोन पानीमा भिजेर वा डुबेर हैरान हुन भएको छ ?मोबाइल भिजेका कारण कहिलेकाही मोबाइल अन नै नहुने समस्या समेत हुने गरेको छ । अझ पानी पर्ने समयमा जोगाउन खोज्दा खोज्दै मोबाइल पानीमा भिज्ने सम्भावना हुन्छ। यी उपाय अपनाउनुस् ! १. तत्कालै…
डिलिट भएको एसएमएस कसरी फिर्ता ल्याउने ?
ujyaalo	 १४ चैत्र २०७४, बुधबार ११:१८
यदी तपाईंले भुलवस कुनै महत्वपूर्ण एसएमएस मोबाइलबाट डिलिट गर्नुभयो भने आत्तिहाल्नु पर्दैन । त्यसलाई फिर्ता पाउन पनि सक्नुहुन्छ । एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा एक पटक डिलिट भएको एसएमएस फिर्ता गर्न सक्ने सुविधा छ । यसको सतप्रतिशत ग्यारेन्टी भने…
महावीर पुनको नयाँ आविष्कार : म्याग्दीबाट उड्दै ‘मेडिकल ड्रोन’
Ujyaalo Nepal	 १२ चैत्र २०७४, सोमबार ०३:४३
काठमाडौं, १२ चैत । सामाजिक अभियान्ता महावीर पुन नेतृत्वको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले निर्माण गरेको स्वचालित मानवरहित ‘मेडिकल ड्रोन’ ले पहिलो उडान म्याग्दीबाट गर्ने भएको छ । नेपालका दुर्गम क्षेत्रमा नियमित औषधि ढुवानीमा महामारी फैलिएको…
तपाईंलाई मोबाइल चार्ज गर्न आउँछ ? थाहा पाउनुहोस् यी ८ टिप्स् !
Ujyaalo Nepal	 ११ चैत्र २०७४, आईतवार ११:२३
एजेन्सी । फोन चार्ज गर्नुअघि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु अत्यन्तै महत्वपूर्ण छन् । यी टिप्सहरुबारे जानी राख्नुहोस् किनकी यसो गर्नाले तपाईको ब्याट्री धेरै समय खप्छ र चाँडै बिग्रिंदैन पनि । थाहा पाइराख्नुहोस् यी ८ तरिका १. जुन कम्पनीको फोन हो…